Kpido: lelee adreesị ozi -e Excel | Martech Zone
Kpido: lelee adreesị ozi-e Excel
Tọzdee, Disemba 12, 2019 Tọzdee, Disemba 12, 2019 Douglas Karr
Ruo ọtụtụ afọ, ejiri m mbipụta a dị ka akụ iji kọwaa naanị otu esi eme ihe, kamakwa iji debe ndekọ maka onwe m iji lelee anya ma emesịa! Taa, anyị nwere onye ahịa nke nyefere anyị faịlụ data ndị ahịa nke bụ ọdachi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ọhịa ọ bụla ka emezigharịrị na; n'ihi nke a, anyị enweghị ike ịbubata data ahụ. Ezie na e nwere ụfọdụ nnukwu tinye-ons maka Excel ime mkpocha site na iji Visual